Home Wararka DEG DEG:Kacdoon ay Laf dhabar uyahiin Dhalinyaro Oo ka bilawday Magaalada Muqdisho&Banaabaxyo...
DEG DEG:Kacdoon ay Laf dhabar uyahiin Dhalinyaro Oo ka bilawday Magaalada Muqdisho&Banaabaxyo Xoogan Oo socda
Boqolaal dhalinyaro ah ayaa Saaka waxa ay isugu soo baxeen Magaalada Muqdisho, kuwaa oo ka ashtakoonaya dilalka dhalinyarada Magaalada Muqdisho.
Isu soobaxan oo dhalinyaradu ay kasoo abaabuleen Warbaahinta Bulshada ayaa barqanimadii maanta waxaa uu ka bilaawday Isgooska Banaadir ee Magaalada Muqdisho.
Dibadbaxan oo ay soo qabanqaabiyeen dhalinta waxbaratay ee Muqdisho ayaa waxa uu salka ku hayaa ka dhiidhinta dilalka loo geestay dadka Magaalada ku nool.
Kacdoonkan dhalinyaro ayaa waxa uu ka bilaawday wiil dhalinyaro ah oo dhowr Maalmood kahor lagu dilay Isgooska Banaadir meel ku dhaw.
Qaar kamid ah qaban qaabiyaasha Isu soo baxan ayaa sheegay in aysan joojin doonin kacdoonkan ilaa inta xal loogu helayo dilalka aan Salka laheyn uu Muqdisho ka dhaca.
Previous articleWAR DEG DEG:Shan Qof Oo Lagu Toogtay gudaha Magaalada Muqdisho&Xaalada Oo kacsan
Next articleBooliska Rabshadaha ka hortaga Oo Lagu soo daadiyay Magaalada Jigjiga
Tartanka loogu jiro Xilka Guddoomiyaha Baarlamaanka oo kululaaday & Musharixiin is-baheysi...